John Jackson - legalmusiconline.info - Page 3 of 5
Evolution Of Online cha cha
Chọpụta otu esi eme ka ịgba chaa chaa n’ịntanetị na egwuregwu cha cha bụrụ oge. O nwere ike isiri ike icheta ndụ na-enweghị cha cha chara n’ịntanetị, mana ndị ọgba bọọlụ ama ama ga-echeta mgbe ịntanetị anaghị
Beingbụ ụwa jikọtara anyị dị mkpa taa. Bịakwute ihe dị mkpa n’ezie na-eme ka ị nwee nzọ ụkwụ n’ihu. Ọ bụ ya mere anyị ji achọ ịkọwara gị otu esi ejikwa mmasị gị na nkwukọrịta na YoCasino.
Nnọọ! Taa, anyị chọrọ ịgwa gị na enwere mgbanwe dị oke mkpa na-esite na iwu ọhụrụ ahụ nke ga-amalite ịdị na Satọde na-esote, Mee 1. Mgbanwe dị mkpa bụ na ị gaghị enwe ike irite uru na
Taa, anyị na-ewetara gị ọhụụ nke na-eme anyị ezigbo obi ụtọ … Anyị nọ na TV! Chọrọ ịhụ ka akụkọ niile YoCasino bi na ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ? Ọfọn, echefula ya … Anyị nọ na MEGA